कता गए ७७ जना महिला तथा बालबालिका ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 01:25:52
जापानी समय : 04:40:52
Tag: कता गए ७७ जना महिला तथा बालबालिका ?
कता गए ७७ जना महिला तथा बालबालिका ?
Posted on October 20, 2018 by Yadav Devkota
बैतडीबाट वितेका दुई वर्षमा ७७ जना महिला तथा बालबालिका हराएका छन् । उनीहरु कहाँ गए, कस्तो अवस्थामा छन् केही पत्तो छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३८ महिला तथा बालबालिका हराएकामा २१ महिला १७ बालबालिका छन् । आव २०७४/७५ मा ३९ महिला तथा बालबालिका मध्ये २८ महिलासहित ११ बालबालिका हराएका प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
हराउनेमध्ये केहीले भागेर अर्कै बिहे गर्ने तथा सानै उमेरमा बिहे गरेर भारततिर गएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ। सीमा नाकामा कडाइ गरे पनि प्रभावकारी हुुन नसकेको प्रहरीको अनुमान छ ।
Posted in जन सरोकारTagged कता गए ७७ जना महिला तथा बालबालिका ?